Sekuyisikhathi sokuthatha izinyathelo njengokusho kwemibiko kaZondo, kuloba uBusi Mavuso - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UMBIKO osanda kukhishwa yiKhomishini kaZondo wengeze ohlwini lwabathintekayo ngokuphenya kabanzi ngokwakwenzeka ngesikhathi sokugwamanda umbuso.
Le mibiko ayiwuphothuli umsebenzi kaZondo, umbiko wokugcina ulindeleke ekupheleni kuka-Ephreli. Nokho kumanje lo msebenzi odonsile futhi obizayo usucacise kahle ukuthi izwe lethu laguqulwa kanjani ukuze kuthathwe imali yomphakathi inikwe abantu abakhohlakele. Kwangenwa ezinhlakeni zalo, zathuntubezwa, kwase kushintshwa imigudu okufanele ilandelwe uma kuthengwa impahla ukuze kusizakale izigebengu, kwagcina ngokuthi kucekelwe phansi okumiselwe ukusimamisa intando yabantu ukuze izigangi zizophunyuka.
Ngombiko wokugcina kumele kugxilwe ekuthatheni izinyathelo njengokusho kweziphakamiso, nakuba sesibone izinyathelo eziningi vele ngale mibiko emithathu yokuqala. Eziningi zazo zithinta ukuphenya nokushushisa, nokuwumsebenzi omkhulu obhekene noPhiko lokuShushisa ezweni. Kukhona ngokuhlanganiswa nangemigudu yezinye izinhlaka njengokuthi ubuholi bamabhizinisi kahulumeni kumele kukhethwe yinhlangano ezimele. Lokhu kukhombisa abashayimthetho okufanele bakwenze futhi kuzodingeka iPhalamende lihlanganise umthetho ozolekelela ukuthi zigcinwe iziphakamiso.
Baningi abantu abathintekayo embikweni. Abanye sebesabise ngokuya enkantolo ukuyophikisa umbiko. Ngicabanga ukuthi akusiyo indlela yokwenza izinto lena. Umbiko uphakamisa ukuthi kuphenywe bese kuthi lapho kufanele khona, kushushiswe. Akusikho ukuthi abantu sebeyashushiswa. Abasolwayo bazothola ithuba elanele lokuziphendulela enkantolo. Ukuphikisana nombiko akubusizi ngalutho ubulungisa futhi kwengeza izindleko phezu kwalezi ezinkulu ikhomishini evele inazo.
Kuyaziwa-ke ukuthi abanye babasolwayo basebenza embonini ezimele, okubalwa kubona nosomabhizinisi abaqavile. Njengoba sengake ngasho phambilini, kumele baphendule abona. Izinhlangano zamabhizinisi zazihamba phambili ekulweni nokugwamanda umbuso futhi iBusiness Leadership South Africa (iBLSA) nezinye zisebenze kanzima ukulwa nokuqeda inkohlakalo kuhulumeni nasembonini ezimele.
Okuzokwenziwa ukuze sidlule esikhathini sokugwamanda umbuso kudinga ukuthi kubhekwane namabhizinisi athintekayo. Ngiyakweseka loko. Into enkulu okufanele ibhekelelwe yisibalo sabantu nezinsizakusebenza ezidingwa ngabaphenyi nabashushisi. UPhiko lokuShushisa ezweni luthwele kanzima njengoba luzama ukulungisa umonakalo omkhulu owenzekile kuthuntubezwa ukusebenza kwalo ngesikhathi sokugwamanda umbuso kanti manje sekufanele lushushise isibalo esikhulu ngamacala abucayi.
Kunezingxoxo ezikhona ngokuthi yini engenziwa ngosomabhizinisi ukweseka abaphenyi nabashushisi ukuze babe nesibalo sabantu esanele. Imboni ezimele inabaphenyi nabahlaziyi abadingekayo kuhulumeni ukuze uhlanganise amacala angaholela ekushushiseni ngempumelelo. Inselelo manje sekuwukuthi angasetshenziswa kanjani lawo makhono futhi akhokhelwe ngendlela efanele nezohlala ivikela isithunzi sokushushisa.
Baningi abantu bafisa ukusiza futhi ngikholwa wukuthi ikhona indlela uhulumeni nosomabhizinisi abangabonisana ngayo ukuxazulula lezi zinselelo ezikhona ukuze lolu sizo lusetshenziswe kahle.
I-BLSA kade yaqala ukweseka ukulwa nobugebengu ngophiko lwayo iBusiness Against Crime, ngakho usizo olunjengalolu luyahambisana nezinjongo zethu. Indawo okusebenzela kuyona amabhizinisi ithembele kakhulu ekusebenzeni komthetho. Njengoba iKhomishini kaZondo isonga umsebenzi wayo, ngizosebenzisana nabalingani bami ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi olandelayo wokuvuselela uqhubeka kahle.
Isinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo sokuthi uhulumeni akufanele ukhokhele unyaka wokugcina wesivumelwano sokunyusa imiholo sizoyisiza imizamo kaNgqongqoshe wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana yokulungisa izinto. Ukube inkantolo ibivune izisebenzi, ukuhlela kukangqongqoshe bekuzoba yize leze njengoba uhulumeni bekuzodingeka ukhokhe imali elinganiselwa kuR38 billion.
Kuyancomeka ukubona uGodongwana eqikelela imizamo yokulungisa ukuphatha imali nokugxila kwakhe ekuguquleni umthetho olawula imisebenzi eyenziwa wuhulumeni ngokubambisana nemboni ezimele akumemezele ethula iSabelomali sakhe sokuqala.
I-BLSA iyayithakasela indlela ungqongqoshe athatha ngayo indaba yokutakula amabhizinisi kahulumeni njengoba ethe sesiphelile isikhathi sokuwatotosa. Nokho idinga ukuphuthunyiswa yonke le migomo nezinguquko.